Ovy masiaka miaraka amin'ny chorizo ​​| Recipe ao an-dakozia
Ovy Chorizo ​​Masiaka
Maria vazquez | 06/06/2021 10:00 | Resety Stews sy lasopy
Araraotina ny andro farany nirotsahan'ny orana ary nangatsiaka tao avaratra izy, manolotra fomba fahandro tena tsotra izay matetika no arahinay mandritra ny volana mangatsiaka indrindra amin'ny taona: ovy masiaka miaraka amin'ny chorizo. Amin'ny maha-mpihinan-kena ahy ahy dia tsy haiko ny manolotra an'ity iray ity, iray amin'ireo tsotra indrindra omaninay ao an-trano.
Ovy, chorizo ​​ary zavatra vitsivitsy hafa ao anatin'io masaka io. Tsy midika izany fa tsy azonao atao ny mampiditra akora hafa aminy hahavitana azy feno kokoa. SASANY akoho, tofu, na tempe natetika mety mifanaraka tanteraka amin'ilay fampitahana. Ary amin'ny maha-miaraka azy, tsy misy toa a salady maitso.
40 minitra dia tsy mila zavatra bebe kokoa ianao raha te-vonona ity masaka ity. Ny torohevitro dia ny hoe rehefa tonga eo ianao, manaova ampy hanamboarana ny sakafo amin'ny roa andro mifandimby. Ny zavatra tsy ho vitanao miaraka amin'ity sakafom-bary ity dia ny fampangatsiahana azy ary rehefa niresaka tamin'ny fotoana hafa isika dia tsy mamaly tsara an'io fomba io ny ovy.
Fotoana hiketrehana: 35 M
2-4 sotro menaka oliva virjiny fanampiny
Tongolo fotsy lehibe 1
Dipoavatra maitso 2
Kisoa 12 an'ny chorizo
½ paprika mafana (na mamy) eran'ny sotrokely
Hena dipoavatra chorizo ​​1 sotrokely
Tetehina ny tongolo sy sakay ary endaso ao anaty vilany misy menaka vitsivitsy sotro fihinanana mandritra ny 10 minitra.
Avy eo, ampio ny chorizo, ny ovy sy vanim-potoana nolavina sy nikitika. Sasao mandritra ny minitra roa nefa tsy mijanona mikorontana mandra-pitondran'ny chorizo ​​ampahany amin'ny tavy.
Manaraka izany, ampianay ny paprika, ny hena dipoavatra chorizo ​​ary manarona ron-kena legioma izahay.
Manarona ny casserole izahay ary Andrahoy mandritra ny 15-20 minitra ny iray manontolo na mandra-pahafatin'ny ovy.
Nankafizinay ny ovy masiaka, mafana miaraka amin'ny chorizo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety Stews sy lasopy » Ovy Chorizo ​​Masiaka
Chorizos amin'ny divay fotsy
Voanjo misy ovy sy bacon natsatsika